Spring Graduation 2021 (IsiZulu Homepage) - UKZN Virtual Graduation
BUKA UMCIMBI WOKUTHWESWA KWEZIQU
WOKWETHWESWA IZIQU WANGENTWASEHLOBO
College of Agriculture, Engineering & Science @ 10H00
College of Law & Management Studies @ 13H00
EZOLIMO, UBUNJINIYELA KANYE NESAYENSI
IZIFUNDO ZEZOMTHETHO NOKUPHATHA
Thola imininingwane lapha!
ISAMBA SABA THWESWE IZIQU
OwakwaZulu Uthole IMasitazi Ye-Opthomethri
‘Ngemva kokuqeda iziqu zokuqala e-UKZN, ngase ngivele ngisijwayele isikhungo, nokho ngangichazeke kakhulu yiHhovisi lokuqhuba izifundo leSikole SezeSayensi YezeMpilo. Abasebenzi bakhona bawusizo kakhulu futhi bayasekana. Iqhaza likameluleki ngocwaningo likhulu kakhulu njengoba engisizile ukuthi ngibekezele ezifundweni. Ngeke nginanaze ukwenza ezinye izifundo e-UKZN ngomuso. ’ kusho uNks uLondeka Noxolo Zulu othweswe izuqu zeMasitazi kwi-Ophtomethri.
Kucwaningwe Ngodlame Ezikoleni ZaseKZN Ocwaningweni Lweziqu Zobudokotela
Umfundisi wase-UKZN uNomakhosi Sibisi uthweswe iziqu zobudokotela beziFundo zeSayensi Yobugebengu nokuPhenya ngocwaningo lwakhe obelubheka udlame ezikoleni, obusobala nobucashile, ngeso labagilwa nalabo ababona begilwa.
Osinde Kwi-COVID-19, Uphase Ngamalengiso Wathola Iziqu Zomthetho ngo-Cum Laude
Ngenkathi uNks u-Dharini Rangasamy ophase i-Bachelor of Laws (iLLB) ngamalengiso u-cum laude eqala izifundo zakhe, wayengakaze acabange ukuthi uyoziqeda ngesikhathi sobhubhane lomhlaba nokuthi kubo bazoguliswa yileligciwane.
‘Abasekhaya nami saphathwa yi-COVID-19 ngonyaka odlule, ngeshwa ngabanjwa yi-COVID edonsayo ngesimesta yokugcina,’ kusho uNksz u-Rangasamy.
Ophase IMasitazi Yezibalomidanti Ngamalengiso Akawuvali Umlomo
Into engikhuthaze ukwenza imasitazi e-UKZN kube ngabafundisi bakhona. Ngibone ukuzinikela kwabo okukhulu, okungenze ngafuna ukuthola okunye okuningi kubona nokuthi ngithuthukise ulwazi lwami emkhakheni engiwaziyo. Bengifisa ukuthola ulwazi oluningi ngamandla,’ kusho uMnu uThabang Chabalala, othole u-cum laude kwi-MSc Statistics.